2 Ụzọ Nyefee MP3 ka iPhone
Otu n'ime ndị kasị ewu ewu na music formats maka iPhone bụ MP3, dị ka ọ na akụkọ ihe ezi uche audio àgwà na-adịghị achọ ka ukwuu free ohere na ngwaọrụ gị. Dị ka AAC, mgbe ọ yiri ka ka MP3, na eziokwu na ọ bụ nnọọ ike ịnụ n'ezie dị iche n'etiti abụọ, karịsịa mgbe na-ege ntị na elu bitrates. Ọzọkwa, nsogbu na AAC bụ na ọtụtụ ngwaọrụ adịghị akwado nke a ọdịyo faịlụ, mgbe MP3 na-akwado site fọrọ ọ bụla gadget. Ọzọ ọzọ, WAV, nwere n'ezie nnọọ mma ụda àgwà, n'ihi na ọ dịghị eji mkpakọ na niile, ọ bụ ezie na WAV faịlụ ndị budata ibu. Niile na ihe niile, ke ibuotikọ anyị ga-akọwa otú nyefee MP3 ka iPhone na iTunes nakwa depụta ole na ole adaba ọzọ software, nke ike-eji n'ihi nzube a.
Method 1. MP3 Nyefee gaa na iPhone site iTunes
Jikọọ gị iPhone na kọmputa site na eriri USB na-emeghe iTunes.
Họrọ ị iPhone na isi iTunes menu.
Ugbu a, pịa File> All nchekwa Library ka ịgbakwunye nchekwa nwere ndị MP3 faịlụ ị chọrọ nyefee ka iPhone.
Ọ bụrụ na ị mgbe synchronized gị iPhone na iTunes na nke a na kọmputa na O nwere ihe nile music na i nwere na gị iPhone, họrọ Niile Music Library na mmekọrịta Music menu.
Alternatively, ma ọ bụrụ na ị chọrọ jikwaa gị music Ọbá akwụkwọ, ị nwere ike họrọ kpọmkwem albums / music Genres ina synchronized na gị iPhone.
Mgbe i jisiri gị music Ọbá akwụkwọ, nnọọ pịa Mee bọtịnụ na ala nri akuku.
Chere maka faịlụ MP3 ina zigara gị iPhone. -Enwe!
PS Nke a na usoro ike-eji bụrụ na gị na-eji onye ọzọ si na kọmputa, dị ka gị iPhone naanị ike synchronized na otu kọmputa na oge. Othervise, faịlụ gị iPhone ga-ewepụ. Na nke a nke a na ozi ga-egosi:
Dị ka na-emekarị anyị achọghị ihichapu niile music si gị iPhone. iTunes bụghị mgbe niile kasị adaba software iji, ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-eji nanị otu kọmputa, ọ dịghị nsogbu ga-erukwa. Na-esonụ ngalaba a ole na ole ọzọ software ga-edepụtara na overviewed.
Method 2. Top 4 Software nyefee MP3 Music ka iPhone enweghị iTunes
Ahịa: $ 49.95 (-dịnụ free version na-enwechaghị atụmatụ) Size: 14.5 MB nyiwe: Windows Brief nnyocha: Multifunctional MediaMonkey bụghị nanị na-enye ohere ka mfe nyefee MP3 ka iPhone ma jikwaa gị audio / video faịlụ, Ọ nwekwara ike tọghata music dị iche iche dị formats, gụnyere WMA, AVI, MP4 na ndị ọzọ. Ke adianade do, software na-agụnye nkwado ndabere na mpaghara ọrụ, akpaaka-DJ, anya mmetụta na ọbụna ndị ọzọ! Music nwekwara ike ibudatara weebụsaịtị site ike n'ime software Podcatcher na-azọpụta ozugbo na MediaMonkey ndekọ. Ọ bụ dakọtara na iPhone na ọtụtụ Android ngwaọrụ. Free version nke software bụ dịnụ.
Ahịa: $ 39.95 (free ikpe mbipute-dịnụ) Size: 29,91 nyiwe: Windows & Mac Brief nnyocha: TunesGo dị nnọọ mfe, ọ bụ ezie ọtọ software maka ebufe gị data (gụnyere music faịlụ) si iPhone ka na kọmputa, na osote itughari. Ọ nwere onye kensinammuo interface na a dịgasị iche iche nke nhọrọ-eme ka a software nnọọ uru ma ọ bụrụ na ị chọrọ ime iPhone MP3 nyefe. Tụnyere iTunes, ị ga-bụghị mgbe eji gị multimedia mgbe mmekọrịta iPhone na kọmputa, na-eme ka ọ na ihe onye ọrụ-enyi na enyi na mfe na-na-eji. Ọzọkwa, software na-akpaghị aka na-atọghata music na video formats, nke mere na ha na-dakọtara na Apple ngwaọrụ. All isi ihe ndị a, nakwa dị ka dị iche iche data management nhọrọ eme ka Wondershare TunesGo a nnọọ ọma ọzọ ka iTunes. Ọzọ iTunes uzo ozo ebe a >> (/itunes/free-alternatives-to-itunes.html)
Ahịa: malite $ 19.99 Size: 8 MB ​​nyiwe: Windows Brief nnyocha: CopyTrans software na-haziri karịsịa maka Nyefee na ijikwa data, dị ka music, kọntaktị, ngwa, photos na ndị ọzọ. Ugbu a, e nwere 4 isi software: CopyTrans, CopyTrans Photo, CopyTrans Ndi ana-akpo na CopyTrans égwu, onye ọ bụla ikwe ka jikwaa a kpọmkwem ụdị data. N'ihi na anyị na mma, ọ bụ dị ịzụta a 4-mkpọ set nke software maka $29.96. Otú ọ dị, na-elekwasị anya music, CopyTrans enye gị ohere mfe nyefee MP3 si iPhone na kọmputa na-enweghị ndidi ụjọ na-atụfu ihe niile (ugboro ugboro itịbe na iTunes), na-enye nchebe na ike ọrụ n'ihi na anyị afọ ojuju. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na iTunes n'ọbá akwụkwọ. N'ikpeazụ, ọ na-akwado niile iPhone na ụdị na-enye ohere ka na-agbalị a free version.
Ahịa: malite $34.99 Size: 10 MB nyiwe: Windows na Mac Brief nnyocha: N'ụzọ dị iche na iTunes, iExplorer-enye ohere ka idetuo MP3 faịlụ site na iPhone na kọmputa, nke bụ karịsịa bara uru mgbe na-agbalị iji nweta gị music bụghị si na kọmputa dị n'ụlọ. Ọ na-enye ohere ka ngwa ngwa jikwaa ndepụta ọkpụkpọ gị na-azọpụta ha kpọmkwem nchekwa maka ọdịnihu ojiji, nakwa dị ka weghachi gị iTunes n'ọbá akwụkwọ si iPhone ọ bụrụ na ihe mere ndị kọmputa dị n'ụlọ. Ọzọkwa, iExplorer egbochi duplicates, site nsuso niile faịlụ ugbua na n'ọbá akwụkwọ. One-click interface, ndakọrịta na Windows na Mac, - oké oke maka ọ bụla Apple ọrụ!
Ọzọ Isiokwu Ị nwere ike amasị w
Ndabere Ozi si gam akporo ka Computer
Ndabere kọntaktị site na akporo ekwentị
Ndabere Photos si akporo ekwentị
Ndabere Data si gam akporo ka PC
Ibufee ọdịnaya site na Samsung ka iPhone
Paghaa Ndi ana-akpo ka a New akporo ekwentị
Copy ọdịnaya site iPhone ka Samsung
Nyefee Data si Nokia ka Android
Olee otú Hichapụ égwu si gị iPhone
4 Ụzọ Iji chọta gị iPhone Serial Number
2 Ụzọ ka mmekọrịta Facebook Ndi ana-akpo na iPhone
Olee otú Dochie iPhone 4/5 / 4S / 5S / 3GS / 3G n'azụ igwefoto
Otú nyefee SMS si iPhone
Best iPhone File onyenlereanya ele iPhone Files
> Resource> iPhone> 2 ụzọ nyefee MP3 ka iPhone